ungazihlanza kanjani izinto zokugezela ezimnyama ze-matte
Ikhaya / Umhlahlandlela Wompompi / Ungakuhlanza Kanjani Ukulungiswa kweMatte Black Bathroom
2021 / 01 / 28 UkwahlukanisaUmhlahlandlela Wompompi 9685 0
Izitayela zokuhlobisa ekhaya ziyashintsha namaza njengamathrendi kunoma iyiphi enye ingxenye yempilo, kusuka emfashini kuya ezinweleni. Noma kunjalo, kunezinto ezithile zokuhlobisa ebezisendleleni yeminyaka iminyaka kungekho phawu lokuma. Izakhiwo zokugezela ezimnyama zaseMatte ziphakathi kwazo.
IMatte black ngumkhuba odume kakhulu emakhaya ngaphesheya kwe-US nasemhlabeni jikelele. Inokubukeka okucacile kwesimanje futhi okusezingeni eliphezulu okuthandwa ngabaninikhaya kude nakude. Vele, kubukeka kahle kakhulu uma kugcinwa kuhlanzekile futhi kuhlanzekile. Ugcina kanjani lokho kubukeka isikhathi eside?
Ngenkathi izinto ezilungiswa ezimnyama ze-matte zilungiswa kalula kunalokho okuqediwe kakhulu, kunemithetho nemihlahlandlela okufanele uyicabangele. Lo mhlahlandlela ukukunikeza konke odinga ukukwazi ukugcina izinto ozibonayo zibukeka zisha futhi nendawo yokugezela yakho ibukeka ikanokusho.
Kungani Kubalulekile Ukuhlanza Matte Black Bathroom Fixtures?
Uma kukhulunywa ngezinto zakho zangaphandle, ukuzihlanza kaningi kuzobasiza ukugcina ukubukeka kwabo okusha-ebhokisini. Akukhona nje ukuthi izindawo zamanzi nezinsalela zisusa kuma-aesthetics wakho we-fixtures, kepha ezinye zalezi zinsalela ziqukethe amakhemikhali angaphela ekugcineni. Ukuzihlanza ngokushesha kuzokusiza uvikele ukulimala kwesikhathi eside ezakhiweni zakho.
Ngenkathi lokho kuyiqiniso ngengaphandle lezinto zakho, ukuhlanza izinto zangaphakathi kwakho kubaluleke kakhulu. Oompompi kanye namapayipi ngokufanayo angavaleka, okwenza izinto zakho ezibalulekile zingasebenzi kahle. Ezimweni eziningi, uhlelo olulula lokuhlanza lungavimbela lezo zinkinga.
Kukangaki Ukuhlanza Ama-Matte Black Fixtures
Sonke sinokuphila okumatasa, ngakho-ke udinga kangaki ukuthi uthathe isikhathi ukuhlanza izinto zakho? Ngenhlanhla, ukuhlanza izindlu zabo zangaphandle kulula ukukufaka ohlelweni lwakho lokuhlanza lwamasonto onke, indlu yokugezela ngayinye ithatha imizuzu emihlanu noma ngaphansi.
Ukuhlanza izindawo zangaphakathi zalapho uthatha khona kuthatha imizuzu embalwa eyengeziwe, kepha imvamisa imizuzu eyi-15-20 inenala yokugezela eneshawa kanye nosinki oyedwa noma ababili uma uhambisana nezikhathi ezijwayelekile zokuhlanza. Lokhu kuphela kudinga ukuhlanzwa kanye njalo ngenyanga noma ngaphezulu ukuze kugcinwe ukwakheka okuncane.
Izinselelo Eziphezulu Ekuhlanzeni Izinto Zangasese Zokugeza Zamnyama
Ukuphela kwamatte black kuvame ukuhlala isikhathi eside, ngakho-ke akusiyo into ekhohlisayo ukuyihlanza njengoba kuqeda okunye. Noma kunjalo, kunezinselelo ezithile okufanele uzigcine engqondweni.
Ukugcina iMatte Qeda
Eminye imikhiqizo yokuhlanza yenzelwe ukuthi ingahlanzeki nje kuphela ihlanzeke kodwa futhi ingeze nokukhanya. Lokho kungaba yinto oyifunayo kuma-countertops akho, kodwa hhayi ezindaweni zakho zokugezela ezimnyama. Uzodinga ukusebenzisa imikhiqizo ezoshiya ukubukeka kwe-matte kuqinile.
Ukususa Amachashazi Amanzi
Inzuzo yemidlalo emnyama yamatte ukuthi ayibonisi izindawo zamanzi kalula njengokucwebezela okuphezulu njenge-chrome noma ithusi eliphucuziwe. Izindawo zamanzi zisabonakala, noma kunjalo, futhi uzofuna ukuzihlanza lapho zivela.
Lezo zindawo zamanzi zivame ukuba nzima futhi ziphikelele kakhulu kunothuli lwakho olujwayelekile nezinye izinhlayiya ezikulungiselweni. Kubalulekile ukuwahlanza ngendlela eqinile ngokwanele ukususa izindawo zamanzi kepha imnene ngokwanele ukugwema ukuklwebha ukuphela.
Okufanele ukwenze nokungafanele Ukwenze Ngokuhlanza Matte Black Bathroom Fixtures
Ukugcina izakhiwo zakho zangasese ezimnyama ze-matte zibukeka zizinhle kakhulu, kuneziqondiso ezibalulekile okufanele zilandelwe, kusuka emikhiqizweni ongayisebenzisa kuya kumasu athile. Landela lezi zeluleko ukuze uthole izinto ezingenabala, ezingenakonakala.
Sebenzisa Isixazululo Esilula Sesepha
Kunamakhemikhali amaningi angalimaza isiphetho esimnyama esimnyama, kufaka phakathi amakhemikhali amaningi atholakala kwimikhiqizo yokuhlanza ezentengiselwano. Iyiphi indlela ephephe kunazo zonke futhi ephumelela kunazo zonke yokuhlanza lezi zindawo? Amanzi alula anensipho.
Gcwalisa ibhakede noma usinki ngamanzi bese ufaka udwi wensipho ejwayelekile yokudla. Qiniseka ukuthi iyinsipho yesitsha yokulinganisa i-pH ukuze ingabi ne-asidi. Hlanganisa, cwilisa indwangu emanzini anensipho, bese uwasebenzisela ukusula izinto zakho.
Kubalulekile ukuthi uhlale ugwema ukusebenzisa ama-asidi ezakhiweni zakho ezimnyama ze-matte. Lawa ma-asidi angaphela ekuqedeni, noma ngabe isimbumbulu sivela kumkhiqizi wekhwalithi ephezulu. Ingashiya ngemuva izikhala ezingalingani zesiphetho esonakele.
Okuwukuphela kokuhlukile ukuthi ungasebenzisa uviniga lapho ususa izindawo zamanzi ezinenkani. Kodwa-ke, uviniga kufanele uhlanjululwe kakhulu futhi kunamasu okufanele uwasebenzise ukugwema ukulimala, esizokumba ngezansi.
Sebenzisa Indwangu Emnene Ekuhlanzeni
Noma yiluphi uhlobo lokuqedela lungaqala ukuklwebheka, futhi i-matte emnyama ayihlukile. Ngisho namathuluzi wokuhlanza ajwayelekile njengamabhulashi, amapayipi wokuklwebha, nezipanji ezimangele angaklwebha izinto zakho. Ithuluzi elihle kakhulu ongalisebenzisa ngenkathi uhlanza izinto zakho ziyindwangu elula ye-microfiber.
Ungasebenzisi ama-Wax noma Imikhiqizo Yokuhlanza ngama-Agents wokugcwalisa
Lesi yithiphu abantu abaningi abangaqapheli, kepha kubalulekile ngokuqedwa kwe-matte. Abenzi bakha isiphetho se-matte ngokungeza ukwakheka okuncane kakhulu kwamaqhuqhuva, amaqolo, nezigodi. Lapho ukukhanya kushaya ngaphezulu, lokhu kuthungatha kusabalalisa ukukhanya ukuze kungabikho ukukhanya okuqinile njengoba uzobona endaweni ebushelelezi.
I-Wax, izihlanza ingilazi, neminye imikhiqizo inezinto zokugcwalisa. Lezi zithako zisebenza ngokugcwalisa amaqolo ebusweni ukuze kukhanye. Ngenkathi lokho kulungele izibuko namatafula wegranite, kuzodala ukungahambelani okucacile ekugcineni kwe-matte black - noma yikuphi ukuqedwa kwe-matte.
Hlanza ama-Fixtures ngokushesha
Uma ugeza izinto zakho ezimnyama ze-matte ngensipho yesitsha, kubalulekile ukuyigeza ngamanzi ngaso leso sikhathi bese uyomisa kahle. Lokhu kukuvumela ukuthi uvimbele noma iziphi izindawo zamanzi noma izinsalela ekusaleleni emuva futhi konakalise umsebenzi wakho wokuhlanza omusha. Khumbula ukomisa izakhiwo ngendwangu ethambile, ehlanzekile ye-microfiber kunokusebenzisa noma yini enokhahlo noma eqoshiwe.
Ungasebenzisi Abahlanzayo Abajwayelekile
Uma ubona umkhiqizo obhalwe ukuthi uhlanza izindlu zangasese ngenhloso ejwayelekile, ucabanga ukuthi, “Kulula lokho, ngingawusebenzisa kunoma yini esegumbini lokugezela.” Kuvela ukuthi "noma yini" yinto encane yokweqisa.
Le mikhiqizo imvamisa iqukethe ama-acid, izinto zokugcwalisa, noma kokubili. Ngenkathi lezi zithako zilungile ezindaweni eziningi, zingalimaza isiphetho esimnyama se-matte, ikakhulukazi ngemuva kokusetshenziswa okuphindaphindiwe kweviki.
Ekugcineni, ngaphandle kokuthi wazi zonke izithako zokuhlanza futhi uqinisekile ukuthi akekho noyedwa kubo obeka ingozi, kungcono ukukucacisa. Insipho yesitsha yenza umsebenzi wokuhlanza izinto zakho ngakho-ke asikho isidingo sabahlanzeli abaqinile. Uma usebenzisa umkhiqizo wokuhlanza, noma kunjalo, qiniseka ukuwugeza ngokushesha bese usomisa okokulungisa ngamanzi ngaso leso sikhathi, njengoba kunjalo ngesincomo sokusebenzisa insipho yesitsha.
Yenza Izindawo Zangaphandle Ezihlanzekile Ngaphambi Kobuso Bangaphakathi
Lapho abantu becabanga ukuhlanza izindawo zabo zokugezela, bacabanga ngezindawo zangaphandle kuqala. Izindawo zangaphakathi nazo zidinga ukunakekelwa, noma kunjalo, uma ufuna ukugcina izinto zakho zisesimweni esihle futhi zisebenza kahle.
Kubalulekile ukuthi uma uhlanza indawo engaphandle nengaphakathi ngendwangu efanayo, noma kunjalo, hlanza indawo yangaphandle kuqala. Izindawo ezingaphakathi zithambekele kakhulu ekwakhiweni kwe-calcium ne-lime deposits, ukungcola nezinye izinhlayiya. Uma uhambisa lezo zinhlayiya ezingxenyeni ezingaphandle zezinto zakho, zingaklwebha noma zishiye izinsalela ekugcineni.
Ungadluli Ngokusebenzisa Uviniga
Njengoba sishilo ngenhla, uviniga yiwona kuphela i-asidi okufanele uyisebenzise ekuqedeni kwakho okumnyama kwe-matte, futhi kuphela ngaphansi kwezimo ezithile. Isebenza kahle ekususeni izindawo zamanzi ezinenkani kepha qiniseka ukuthi ulandela le nqubo ngokucophelela.
Okokuqala, thela uviniga. Isixazululo sika-50% uviniga namanzi angama-50% ngokuvamile sisebenza ngokwanele ukuthi sisebenze kodwa sibe mnene ngokwanele ukugwema ukulimala. Gcoba indwangu ethambile ye-microfiber kulesi sixazululo bese uyisebenzisa ukusula ngobumnene izindawo zamanzi.
Ngokushesha nje lapho usuqedile hlambulula i-fixture kahle ngamanzi ukuze ususe noma imuphi umkhondo osele weviniga. Ekugcineni, yome ngendwangu ye-microfiber ehlanzekile.
Funda Imiyalo Yomkhiqizi Wakho
Uma ungabaza ngokunakekela izinto zakho zangasese, hlala uphendukela kumiyalo yomkhiqizi. Izincwajana eziningi zokufundisa ziyatholakala ku-inthanethi uma ungazange uyigcine ikhophi yakho yoqobo.
Abakhiqizi abahlukahlukene kwesinye isikhathi basebenzisa izinto zokwakha namasu ahlukahlukene ukudala ama-matte black finishes abo. Ngaleso sizathu, bazi kahle kamhlophe ukuthi iziphi izinhlobo zemikhiqizo namasu azohlanza izakhiwo zawo ngempumelelo ngaphandle kokufaka engozini yokulimala.
Izindawo eziningi zokugezela ziza nohlobo oluthile lwewaranti yomkhiqizi futhi, futhi kwezinye izimo, ukuphambuka emiyalweni yokunakekelwa komkhiqizi kuzokwenza isiqinisekiso sakho singasebenzi. Kuhlale kungcono ukuphepha kunokuzisola.
Ukuhlanza Izingxenye Zangaphakathi Zezinto Zokugeza Zakho
Njengoba sishilo, kubalulekile ukugcina izinto zangaphandle zezinto zakho zangasese zibukeka zizinhle, kepha udinga ukuhlanza izindlu zangaphakathi zazo ngezikhathi ezithile. Lokho kuya kunoma yikuphi ukulungiswa okunezingxenye zangaphakathi, njengama-drain namapayipi anama-aerator.
Ukuhlanza i-Faucet Aerator yakho
I-aerator ucezu oluncane ngaphakathi kompompi wakho olubukeka njengesikrini esihle. Ihlunga ezinye izinhlayiya emanzini akho ngenkathi ifaka nomoya emfuleni wamanzi ngakho-ke kungumfudlana obushelelezi. Njengoba ilusizo njenge-aerator, ingakhulisa ukwakheka kwezinhlayiyana ngakho-ke idinga ukuhlanzwa ngezikhathi ezithile ukuze ingavimbeli amanzi ukuthi angene.
Emiphethweni eminingi, i-aerator ingaphakathi kwesikulufu esincane ngaphakathi kompompi wakho, imvamisa iphuma kancane ngaphansi kwesikhafu sepayipi. Imvamisa ungavula le cap ukuyisusa, noma kunjalo kungcono uhlole imiyalo yomkhiqizi wakho ukuze uqiniseke.
2. Dala Isixazululo Sakho Sokuhlanza
Sebenzisa uhlobo olufanayo lwesixazululo sokuhlanza osisebenzisela izinto zangaphandle ezimnyama ze-matte: insipho yesitsha namanzi. Hlanganisa usinki wakho noma ibhakede bese uzolungela ukuhamba.
Usebenzisa indwangu, khuhla ibhulashi, isiponji, noma ibhulashi lamazinyo elidala, khuhla i-aerator emanzini anensipho ukukhulula ukungcola nokwanda. Hlanza njalo kuyo yonke indawo, ususe izinhlayiya ezikhululekile. Ukuhlola okubonakalayo okulula kuzokutshela ukuthi i-aerator ihlanzekile nini.
Ungasebenzisa futhi leli thuba ukuvuselela ingaphakathi lompompi wakho ngoba i-aerator ivame ukuyivimba. Thatha ibhulashi lamazinyo elidala ngenye yaleyo nsipho yokudla namanzi uhlikihle ingaphakathi lompompi. Udinga ukungena kuphela kumasentimitha ambalwa ukwenza umsebenzi ophelele.
4. Faka esikhundleni se-Aerator
Beka izingcezu ze-aerator ndawonye ngendlela efanayo ezazikhona lapho uzikhipha. Zizwe ukhululekile ukuhlola imiyalo yomkhiqizi uma ungaqiniseki. Mane nje uhlanganise lesi sikebhu esihlanganisiwe sibuyele endaweni futhi usuqedile.
Ukuhlanza Iziphetho Zakho Zokugeza
Amapayipi okucwila namanzi okugeza yizingxenye ezibalulekile zezinto zakho zokugezela, futhi adinga ukuhlanzwa kwangaphakathi okuhle njalo. Kwesinye isikhathi ukukhama kukutshela ukuthi sekuyisikhathi ngokukhipha amanzi kancane noma ngokuthuthukisa iphunga elibi. Noma ungaziboni lezi zimpawu, kuyasiza ukuhlanza amadreyini akho njalo ngenyanga noma ukuze uhlale ngaphezulu kwama-clogs.
Esimweni samadreyini okusinki, imvamisa ungaqaqa isikhungo samanzi kalula ngesandla. Endabeni yemisele ethile yokugeza, kungahle kube nezikulufo ezincane okudingeka uzisuse nge-screwdriver esilula.
2. Susa noma yiziphi izembozo zangaphakathi
Ungathatha ithuluzi lokususa i-clog kunoma yisiphi isitolo sehadiwe. Yinduku ende, ezacile, eguquguqukayo, evame ukwenziwa ngepulasitiki, enezingwegwe emaphethelweni okubamba izinwele nezinye izidumbu ezivala amanzi. Vele ulayishe leli thuluzi emgodini bese ulidonsela phezulu ukuze ususe noma yimaphi ama-clogs ngaphakathi kwezinyawo zokuqala ezimbalwa zomsele.
3. Hlanza Eduze nangaphakathi kwe-Drain
Uma noma yimaphi ama-clogs angcolile esehambile, sebenzisa indwangu yakho ye-microfiber namanzi anensipho ukuhlanza emaphethelweni edreyini nangaphakathi kwaphezulu impela. Ungakhohlwa ukuhlanza ucezu lokukhipha olususile ekuqaleni.
4. Hlanganisa kabusha iDreyini
Ngokukhipha amanzi kuhlanzekile futhi kuhlanzekile, sekuyisikhathi sokuphinda usibuyisele endaweni futhi ujabulele ukukhipha kwakho okusha okungenamanzi.
Ukunakekela iMatte Black Bathroom Fixtures yakho
Izindwangu zokugezela ezimnyama zeMatte zinokubukeka okunethezeka nokucwengwa ngempela. Noma kunjalo, ngisho nezinto ezinhle kakhulu zingabukeka zingcolile uma ungazigcini zihlanzekile futhi uzinakekela kahle. Landela lo mhlahlandlela ukuze ugcine izinto zakho ezimnyama ze-matte zibukeka zizinhle futhi zenze ukubonakala okuhle kuwo wonke umuntu eminyakeni ezayo. Uma usathengela izindawo ezinhle, hlola imihlahlandlela yethu yokuthenga izinto zokugezela.
Kunconywe Imikhiqizo Yompompi Wokugezela Omnyama
Isikulufu esiqiniselwe ekugcineni kwethumbu Sokugezela Esinokukhipha Umhlangano Matte Black
Matte Black Bathroom ompompi 4 Inch Centerset
IMatte Black Isiphatho Esimbili Esibanzi Sombhobho Wokugeza
Isibambo Sombhobho Wokugeza Esingashadile Esilodwa Matte Black
Isikulufu esiqiniselwe ekugcineni kwethumbu Esimnyama Nge-Handle Swivel Spout Ehlukile
Edlule :: Uyini Qeda Odume Kakhulu Wompompi Bokugeza? Olandelayo: Ungayikhetha Kanjani ompompi Wokugeza: 2021 Umhlahlandlela Wokuthenga
2021 / 02 / 03 8257
2021 / 01 / 27 6197